Erayga fansaar macnihiisu waa xiriir. Xiriirna waa isku xiraha laba shay ama laba qeybood. Ka soo qaad inaad soo iibsatay makiinad, haddaba si ay u qabato makiinada hawsheeda waxaa loo baahan yahay in la siiyo macluumaad ay ku shaqeyso. Markaa waxaa la dhihi karaa makiinada shaqada ay qabanayso iyo macluumadka la siiyey waxaa ka dhexeeya xiriir.
Baabuurku waa nooc ka mid ah gaadiid la adeegsado, baabuurka si loo wado waxaa uu u baahan yahay macluumaad kala duwan. Waxaa la dhihi karaa waxaa jira xiriiro badan oo isku wada xiran marka baabuura la isticmaalayo sida marka baabuurka xoog loo wadaayo iyo marka la joojinaayo. Baabuurka sida uu u shaqeeyo waxay ku xiran tahay macluumaad la siiyo.
Foto: Christian Almstedt,
Bal ka soo qaad in makiinaddan ka muuqata sawirka dhinaca midig ay qabato shaqooyin dhowr ah.
Marka aan xagga sare kaga shubno walax sida tiro oo kale waxay xagga hoose ka soo tuureysaa tiro ka duwan tiradii dhinaca kore ka soo gashay. Shaqadaas waxay ku socotaa nidaam ku socda xeer xisaabeed. Xiriirkaa siyo xeerkaas ayaa waxaa lagu magacaabaa fansaar.